Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ígwè dị elu China Manufacturer
Nkọwa:Ọnụ ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ dị elu dị mfe,Ụlọ Elu Garage nke Ụlọ Nche echekwara,Ọnụ Ụzọ Ntugharị Na-adịghị Ngwa Ngwa
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Ntugharị Roller > Ọkpụkpọ Roller na-emepụta ihe ọkụkụ > Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ígwè dị elu
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ígwè dị elu
Ihe Nlereanya.: HF-J 204
Ọnụ ụzọ siri ike dị mkpa na-echedo nchedo gburugburu ebe obibi, ịchekwa ike, akara, ịrụ ọrụ dị elu, nkwụsi ike nke ifufe, ogologo oge, mgbochi na-abaghị uru. Ụdị ụzọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ na-agba ọsọ dị elu, ọnụ ụzọ na-ewepụta ihe dị iche iche na-ekpo ọkụ ikpochasị ihe, na-egosipụta mma nchebe okpomọkụ, ahụ ọkụ, ike dị elu na ọsọ ngwa ngwa. Site n'ụdị ụzọ a, mgbe ọ bụla a meghere ma mechie ụzọ, enwere ike ịchekwa ike nke ụlọ ọrụ ahụ site na ihe dịka 80%.
Akwa ọsọ, Akpaaka, nchedo, ichebe okpomọkụ, inogide.
A na-eji ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ahụ eme ihe n'èzí n'èzí.
Ogwe igwe dị iche iche ị ga-ahọrọ
A na-eji ọnụ ụzọ eme ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Europe na United States, dị mfe iji, dị mfe iji rụọ ọrụ, a pụrụ ịdabere na ya ma mara mma. Ngwaahịa a bụ nke a pụrụ ịdabere na ya, nke bara uru, dị mfe iji rụọ ọrụ na ụgwọ ọrụ dị ala, ma nyekwa ya afọ zuru ezu mgbe ọ nwụsịrị. Usoro nchịkwa jiri mgbaaka DSP ọkpụkpụ ọhụrụ na-agba nsị n'ọhịa nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ka isi, na-achọpụta na e nwere ihe karịrị 150,000 omume na-enweghị ntụpọ kwa afọ na ngwa ahụ.
1) System Nchịkwa
Ọnụ ụzọ dị mfe dị mfe na-esetịpụ usoro nchịkwa pụrụ iche, na-eji akara nchịkwa nwere ike, ụzọ abụọ 220-atọ 380V-ike 0.75-1.5-2.2KW, igbe nchịkwa na mgbagha isi ike, bọtịnụ mkpọchi mberede, bọtịnụ akakaaka akakaaka, jiri aka na-achịkwa bọtịnụ elu na ala. Ọchịchị kacha mma nke oghere dị elu nke ọnụ ụzọ.
2) Ngwongwo ígwè
Ụgbọ okporo ígwè ụgbọala na-eji usoro ihe eji eme njem pụrụ iche: 220V-3-phase 380V-power 0.75-1.5-2.2KW, onye a maara nke ọma na koodu nchekwa; usoro mmeghe mberede ngwa ngwa;
1. Mee ọrụ nke nchekwa nchekwa (dịka ọkụ ọkụ) ka ọ bụrụ ihe kachasị mma ma laghachi ngwa ngwa.
2. Ike siri ike. N'ime oge ugboro ugboro, mgbanwe ahụ nwere ike ịrụ ọrụ karịa otu puku ugboro n'ụbọchị, nke nwere ike ịmata ọrụ ntụgharị aka nke ọrụ aka, ma hụ na ọrụ ọnụ ụzọ ahụ siri ike. A na-edozi kaadị ụlọ ọrụ na ogbako a, a ga-enyekwa bọtịnụ elu ahụ n'èzí ọnụ ụzọ ngwa ngwa. Ọ dị mfe maka ndị si mba ọzọ ịbanye.
3) usoro nchekwa
1. Nchebe nke infrared nchedo elekere anya: E nwere ụzọ abụọ nke redio na n'akụkụ abụọ nke ọnụ ụzọ. Mgbe enwere ihe mgbochi n'okpuru ọnụ ụzọ ngwa ngwa, ahụ ụzọ ahụ meghere; mgbe ozu ahụ gbadara, e nwere otu ihe na-agafe, ọkpụkpụ ahụ ga-emeghere n'èzí, na ịnweta bụ n'okpuru. Oge igbu oge na-ebelata. Enwere ike iji ngwaọrụ infrared a na-ahụ anya iji chịkwaa nlọghachi ngwa ngwa nke ọnụ ụzọ. Enwere ike ịgbatị ọsọ ọsọ ọsọ site na ịmeghari usoro. O nwekwara ike ịhọrọ njirimara njirimara nke ngwaọrụ infrared site na ịmegharị ọnụọgụ abụọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe emetụtara infrared, ma ọ bụ nkwụsịtụ otu oge ma ọ bụ ọrụ na-adịghị arụ ọrụ na-adịte aka, a ga-ekpebi njedebe ndị ahụ site na ịmegharị akụkụ ahụ.
2. Nchebe nchebe n'okpuru ala: Mgbe ọnụ ụzọ ahụ daa, n'ihi na ihe ahụ nọ na mpaghara ikpuchi nke nchedo infrared nchedo, mgbe a na-emechi ahụ ụzọ n'okpuru ihe mgbochi ahụ, ozu ahụ na-arịgo elu ngwa ngwa, na-echebe ihe ahụ ma ọ bụ onye na-agafe agafe n'okpuru, zere ihe mberede.
4) Iguzo ikuku
Mmiri na-eguzogide mmiri dị 32 m / s
5) Ichekwa ọrụ
Edere okporo ígwè ntụziaka, akara ọnụ ụzọ n'etiti ọnụ ụzọ, ogwe aka nke ụlọ ahụ, akara aka nke azụ ahụ, ọtụtụ akàrà na-eme ka ịdị elu na ịpụ iche n'ime na n'èzí.
Ngwaahịa : Ọnụ Ụzọ Ntugharị Roller > Ọkpụkpọ Roller na-emepụta ihe ọkụkụ
Aluminum Alloy Roller Shutter Door Kpọtụrụ ugbu a
Ogwe Ụzọ Ntanaka Alloy Alloy External Alloy Kpọtụrụ ugbu a
Omenala na-eme ka ọkpụkpụ Alloy Roller Shutter Door Kpọtụrụ ugbu a
Egwurugwu Aluminom na-eji Oghere Dị Iche Iche Dị Nfe Kpọtụrụ ugbu a
Aluminum Alloy Metal High Speed ​​Roller Shutter Door Kpọtụrụ ugbu a
Aluminum Alloy Frame Automatic High Speed ​​Door Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ígwè dị elu Kpọtụrụ ugbu a
Oghere ugbo ala na-agbanye ụgbọ okporo ígwè maka ụlọ ụlọ Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ dị elu dị mfe Ụlọ Elu Garage nke Ụlọ Nche echekwara Ọnụ Ụzọ Ntugharị Na-adịghị Ngwa Ngwa Ọnụ ọnụ ọnụ ụzọ dị mfe Ọnụ ọnụ ahịa ọnụ ụzọ dị oke ọnụ Ọnụ ọnụ ọnụ ụlọ ngwa ngwa dị mfe Ọnụ ọnụ ụlọ ọnụ ụzọ ngwa ngwa Ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ ọsọ Servo